kulan Muqdisho ku dhaxmaray Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Xassan Shiikh | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii kulan Muqdisho ku dhaxmaray Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Xassan Shiikh
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa galabta hoygiisa Magaalada Muqdisho ku booqday Madaxweynihii hore ee Dalka Xassan Sheikh Mohamud oo sidoo kale ka tirsan midowga musharaxiinta.
Inkastoo aan faahfaahin laga bixin kulanka labada masuul, haddana warar ku dhow dhow ayaa sheegaya iney ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey ee Somalia gaar ahaan arrimaha doorashada iyo xiisadaha ka taagan caasimada.
Cali Guudlaawe ayaa ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ee sida weyn u taabacsan Madaxweynaha xiligiisu dhamaaday ee Farmaajo.
Previous articleDowladda Imaaraadka Carabta oo dowlad ku-meel gaar ah” ugu yeertay dowladda Soomaaliya
Next articleDaraasad cusub oo Mareykanku sameeyay oo soo jeedinaysa in xirashada laba maaska ay si fiican qofka uga difaaci karto caabuqa coronavirus.
Golaha amaanka QM ayaa maanta oo isniin ah fadhi deg deg ah ka yeelanaya si ay uga doodaan wadciga magaalada Qudus, sido kale...